Raharaha Befandriana Avaratra : Niditra an-tsehatra ny “Komity mpanadihady” -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha Befandriana Avaratra : Niditra an-tsehatra ny “Komity mpanadihady”
Raharaha Befandriana Avaratra : Niditra an-tsehatra ny “Komity mpanadihady”
01/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nivoatra ny toe-draharaha. Mila ny marina momba an’iny raharaha Befandriana Avaratra iny koa ny filoham-pirenena, fa tsy ny mpiaro ny zon’olombelona ihany akory. Niditra an-tsehatra ankehitriny ny “komity mpanadihady” hanao ny fanadihadiana momba io raharaha nahafatesana polisy miisa roa teo am-panatanterahana ny asany iny.
Tsy azon’ny saina aman’eritreritra ekena kosa izany hoe “mpitandro ny filaminana” manao ny asany ara-dalàna, no novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ka avy eo navadika resaka hafa indray.
Ahitana zandary miisa telo sy polisy miisa telo ity komity mpanadihady ity. Ny avy eo anivon’ny zandarimaria no mitarika izany. Ny praiminisitra mpisolo toerana Narson Rafidimanana no mitarika an’io vondrona mpanadihady io any an-toerana. Ny tanjona dia tokana ihany : “ hamoaka ny marina momba an’ity raharaha ity”. Na misy aza anefa izay fanokafana fanadihadiana izay dia tsy midika akory izany fa manome vahana ny fitsaram-bahoaka ny fisian’ny famotorana toa izao. “Tsy ekena mihitsy ny fitsaram-bahoaka. Mariky ny fiverenana amin’ny gaboraraka izany”, hoy ny Praiminisitra mpisolo toerana Narson Rafidimanana.
Efa nanome toromarika hentitra momba ity raharaha famonoana polisy roalahy tao Antsakabary Befandriana Avaratra ity koa ny Filoham-pirenena, tamin’ny fitsidihany an’i Mahajanga ny faran’ny herinandro teo. “Na iza na iza voapaingotra ao anatin’io dia andraisana fepetra avokoa”, hoy ny Filoha. Tsy manafoana ny fanadihadiana efa nandeha ihany koa ity fidiran’ny “komity manokana” hanadihady any an-toerana ity. Olona miisa 31 mantsy no efa voarohirohy tamin’ny famonoana an’ireo polisy roalahy ireo ary efa natolotra ny Fampanoavana tany Befandriana, omaly.
Namoaka fanambarana ny amin’ny tokony hisian’ny fifidianana malalaka, mangaraharaha amin’ny taona 2018 ny Parlemanta Eoropeana ny alakamisy 16 Novambra 2017 teo tany Strasbourg. Mandeha an-jambany fotsiny araka izany ny fivoriana sy ny fanapahan-kevitra raisin’ity Parlemantera ...Tohiny
Fandikan-dalàna nataon’ny Sambo « Louise II” : Raikitra ny sakoroka…